Kukuphi ukuqinisa nokuthuthukisa izipikili zakho?
Ubuhle besifazane I-manicure ebonakalayo evela ku-LCN
Noma yimuphi owesifazane uhle ngendlela yakhe, kungakhathaliseki ubudala, isitayela nokuziphatha. Kulowo nalowo ungathola okugqamile. Izitha kuphela zokuheha abesifazane kukhona ukukhathala, ukulala, ukungabi nesikhathi sokukhululeka kwezinqubo zezimonyo zekhwalithi. Ukubukeka kahle kungenye yezinzuzo eziyinhloko abalingani bobulili obuhlukile kakhulu. Inkosikazi enhle yokuzilibazisa enezinwele ezinomzimba onomzimba onomzimba onomzimba onomzimba omncane futhi onomusa wokugqoka wezinwele kusukela emizini yokuqala inganqoba inhliziyo yomuntu. Ngaphezu kwalokho, umuzwa wokuphakama wangaphandle unikeza ukuzethemba kwangaphakathi, isibindi, ukuba yisinyathelo sokuqala empumelelweni nasolwandle. Awukwazi ukulondoloza isikhathi nemali ngokuhlehlisa ukunyuka kwesiloni kuze kube izikhathi ezingcono. Yiba mnandi lapha futhi manje. Abaphathi bezobuchwepheshe be-Beauty Centre LCN banikela ukunakekelwa kwekhwalithi yezinsipho ngokusebenzisa izimonyo zekhwalithi yangempela yaseJalimane.
Izipikili ezinhle nezinempilo emizuzwini engu-15
Ochwepheshe bezindlela eziyingqayizivele ze-salon zokubuyiselwa kwezipikili ezinobunzima nezincane. Kungenzeka futhi ukuthuthukisa amapulangwe e-nail ngemuva kwenqubo yokwakha noma ukusebenzisa ama-varnishes ngesisekelo se-asidi. I-Gost Boost Gel esetshenziselwa le njongo iqukethe kuphela izingxenye zemvelo. Ukukhulisa i-Gel kungene ngaphakathi kwesakhiwo se-nail bese kuwuvuselela. Inqubo ithatha amaminithi angu-15 kuphela, kodwa umphumela udlula konke okulindelwe. Izipikili ezilimazayo zithola ukubonakala okubonakalayo, ziqinise futhi ziphulukise.
Inqubo yokufaka uphawu ayikho umphumela ongaphansi. Phezulu kwesikhayili sisetshenziselwa umkhiqizo okhethekile oqukethe u-wax wemvelo. Lokhu akuphilisi izipikili kuphela, kodwa kusiza ukuwavikela emiphumeleni eyingozi yemvelo. Uchungechunge lwezimonyo ze-nail lokusungulwa lwakhiwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe obuyingqayizivele. Izingxenye zemvelo ekubunjweni kwama-agent zenza kahle futhi azifaki ukuphendula kwe-allergen.
Ubuhle be-LCN - Hlaziya izandla nezinzipho
Ngaphandle kokubuyiselwa, i-Beauty Centre LCN inikeza amakhasimende ayo izinqubo ezahlukene ze-SPA zokunakekelwa kwezandla nezipikili. Izivakashi ezise salon nazo zingazijabulela ngokuzikhandla kwamanje nezokusetshenziswa kwama-varnishes angamelana ne-ceramic. Imibala yabo inama-shades angaba ngu-100. Ochwepheshe be-salon baxazulula kalula noma iyiphi inkinga yezimonyo.
Ungavakashela i-Beauty Centre LCN noma yiliphi usuku kusukela ngo-10: 00 kuya ku-22: 00. I-salon itholakala ekhelini: St. Petersburg, TRK "Piterland", Primorsky Prospekt 72, 1 phansi. Ngaphambi kokuvakashela, kunconywa ukubhalisa ngenqubo ngokubiza 8 (812) 385-10-30.
Ukufaka izipikili nge-wax: sihlanganisa ndawonye ne-LCN yintoni le nqubo
Izicathulo zokugqoka kwakusihlwa
Isaladi lesitshalo elibiwe
Ukuhlanza - kusiza isilwane
Isaladi nge izaqathe namalenti
Truffles ezenziwe ngokwenziwe
Masks for face, amathiphu
Izitshalo zokwelapha nezindlela zokusetshenziswa kwazo kubantu